Jwxo-shiil oo Afka Abur ka Keenay Kol ay Kooxdiisu Kulan Hoose Yeelatay – Rasaasa News
Oct 19, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilada
“Hadaad hore u maqli jirtay, Faras reer Cali nacay iyo Naag reer Cabdile nacay midna ebda ma leh, haatan waxaa socota Jabhad reer Haaruun hogaankeeda nacay halkee la gayn” sidaasi waxaa yidhi qaar ka mid ah xubnaha kooxda Jwxo-shiil, oo diiday masuuliyad lagu tuugay.
War naga soo gaadhay dalka Swisserland ayaa waxay xaqiijinayaan in la dhigay Jwxo-shiil Isbitaal ku yaal dalka Swisserland, ka dib kolkii uu damcay kolan ay isugu yimaadeen dad kooban oo kooxdiisa ah, in si baxsad ah uu Macalin Diirane ugu wareejiyo hogaanka kooxda Jwxo-shiil.
Jwxo-shiil oo aaminsanaa in uu kaga siiban doono dhibaatada uu sameeyey mid ka mid ah ragii hore asaxaabta ula ahaa Dr. Dolal, gadaalse u baydhay dhinaca Jwxo-shiil, iyaga oo rajo jago hunguri jacayl darteed uga baydhay wadadii halganka, ayaa mudo sugayey in Jwxo-shiil mar uun ku wareejin doono hogaanksa Jwxo, haatanse ay hawadoodii hog madow gashay, ka dib kolkii gacmaha dhiig uu la galay Jwxo-shiil.
Siddaa ay wararku sheegayaan Jwxo-shiil ayaa codsaday in Macalin Diirane uu si ku meel gaadh ah u sii hayo hogaanka kooxda Jwxo-shiil, madaama uu xanuunsanayo, inta laga helayo dad uu qalbigoodu meel u wada jeedo. Macalinka oo ah nin aan ahayn sida uu u muuqdo, ayaa ku keenkeenay Jwxo-shiil, isaga oo yidhi “Maxamed Cumarow, hadaad bukto iyo hadii aadan bukinba wax aad ka tagtay ma jiraan, wax laga qaban karo ururka ONLF-na maanta ma jiro “. Erayadaasi kolkii ay afka Macalinka ka soo baxeen ayuu Jwxo-shiil bishimo cun bilaabay isaga oo sida la sheegay uu dhiig badan maskaxda hardiyey, nasiibkiisa ma gaadhin wax dhaawac maskaxeed ah, xaaladiisuna wey degan tahay haatan.
Waxaa koobtaas ku kala dareeray dadkii koobnaa ee isugu yimid, iyada oo qaar ka mid ah qaraabada Jwxo-shiil ay macalinka aad u canaanteen iyaga oo leh “ma in aad disho ayaad ugu talo gashay”, isaguna wuxuu yidhi waa Macalinka “hadii uusan caafimaad qabin muxuu noogu yeedhay”.
Waxayna Macalinka iyo Muudeey kolkiiba u kicitimeed dhinaca London oo ay xaasaskoodu degan yihiin, halkaasi oo shaqada ay qabtaan ay tahay qayilaad iyo soo qaadida rootiga iyo caaga caanaha ah ee carootooda.
waxay Jwxo-shiil hore isu qardoofeen Ina Dhuubo iyo Qaaxo oo iyagu aad moodid in ay goosteen in ay ka samaystaan, dalka Australia koox ay sawirada ka qaataan si ay ugu soo dhajistaan bogga Rodo Afjano Qorahey.com, oo isagu qora uun warar maalaayacni ah, oo ay dadweynuhu ogg yihiin in ayna waxba ka jirin.
Xaalada caafimaad ee Dambiile Jwxo-shiil wixii ka soo kordha dib ayaanu idiinka soo sheegi doonaa, kolka aanu helo warar dheeraad ah.